calendar 2013 “Module” Kalenda - Imewe Mmewe
Wenezdee 26 Jenụwarị 2022
Kalenda Modul ahụ bụ kalenda ọnwa atọ bara uru yana iberibe nke onwe ị nwere ike ijikọ dịka modulu cube nwere akụkụ atọ ka ị nwee ike ịchịkọta ha na mma gị. Ndụ na ekike: Qualitykpụrụ dị mma nwere ike ịgbanwe oghere ma gbanwee obi ndị ọrụ ya. Ha na-enye nkasi obi nke ịhụ, ijide na iji ya. Ejiri ha dị ka ike na-eju anya na ihe ịtụnanya, na-enye ohere sara mbara. Emebere ngwa ahịa anyị nke mbụ site na iji echiche nke “Life with Design”.
Aha oru ngo : calendar 2013 “Module”, Aha ndị na-emepụta ya : Katsumi Tamura, Aha onye ahịa : good morning inc..
Mọnde 24 Jenụwarị 2022
Kalenda Katsumi Tamura calendar 2013 “Module”